Goatemala: mampihatra ny fahamehana vokatry ny rivo-doza Agatha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jona 2010 21:21 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, Nederlands, বাংলা, Français, English
Taorian'ny fihetsehan'ny volokano Pacaya mafimafy kokoa tamin'ny herinandro lasa, dia niforona nanakaiky an'i Amerika afovoany ny rivo-doza Agatha ka namely mafy an’ i Gatemala, nandrava be tany amin'ny faritra avo, maro ny olona tsy hita popoka, olona maty 93 raha kely indrindra, lalana tapaka, tetezana tapaka ary namotika be koa tany amin'ny faritra ambanivohitra.
Nitsahatra ny rivotra be tamin'ny 30 may kanefa vokatry ny fahalehibeazan'ny fahavoazana, dia naato ny fianarana any an-tsekoly hatramin'ny 04 jona ary ao anatin'ny fampitandremana loza ny firenena manontolo. Manentana ny mponina ny tambajotran'ny mpampahalala vaovao nomerika mba tsy hivoaka ny trano raha tsy hoe tena tsy maintsy angaha.
Sary nalefan'ny governemanta any Gatemala nahazoana alalana tamin'ny CC BY NC SA license.
Geraldine Mac mitantara ny fahavoazana vokatry ny atsanga:
Nambara ny fiantsoana firenena ho anaty hamehana tany Goatemala satria namely mafy ny faritra afovoan'i Amerika ny rivo-doza niaraka tamin'ny orambe. Niteraka fikorianan'ny atsanga (fotaka be) i Agatha ary namotika trano maro sy fananana maro, nanapaka lalana ary niteraka tahotra sy horohoro manerana ny faritra rehetra sady ao koa ny mety hipoahan'ny volokano. tao amin'ny tanàna antsoina hoe Alomolonga tokony ho 120 maily miala ny renivohitra Guatemala City dia trano iray no nihotsahan'ny fotaka ka olon-dehibe 2 niaraka tamin'ny ankizy 2 no maty tao. Olon-dehibe niaraka tamin'ny ankizy hafa koa miisa efatra no maty tany amin'ny toerana hafa vokatry ny orambe izay niteraka fikorianan'ny fotaka ary olona 11 no nanjavona. Miteraka olana eo amin'ny fifamoivoizana ireny fikorianan'ny atsanga ireny ary miraviravy tanana izay faritra voakasika.
Nanoratra ny lisitry ny adiresy izay hahafahana manome fanampiana ny tra-boina vokatry ny rivo-doza ilay mpitoraka bilaogy Chitiore. Tsy mbola voafaritra mazava ny fahavoazana, kanefa efa nihena ny herin'ilay rivo-doza, izay zavatra nolazain'ny bilaogy Good News any Gatemala hoe “fahagagana”. Amin'izao fotoana izao dia mikisaka mankany amin'ny faritra mora tra-pahavoazana indrindra eto amin'ny firenena ny loza, ary mafy ny fahavoazana any. Niakatra be ny renirano vokatry ny orana be ary lalana maro no tapaka sy voasakan'ny vato nentin'ny rano.
Trano akaikin'ny volokano. sary nahazoana alalana tamin'ny CC BY NC SA nalefan'ny governemanta any Gatemala.
Araka ny voalazan'ny twitter ampiasain'ny governemanta amin'ny kaonty @TuGuatemala [es] ny isa ofisialy navoaka hatramin'ny alahady maraina teo dia 13 no maty, 30 tsy hita popoka, 17 101 no mipetraka amin'ny trano vonjy maika, 2 912 no trano simba. Hatramin'io andro io dia efa niakatra ho 100 ny isan'ny maty. Mangataka fiaraha-miasa sy fifanampiana amin'ny samy Goatemaliteka ny fanjakana sy ny fanampiana avy amin'ny fiombonam-be iraisam-pirenena ihany koa. Afaka mijery sary (pdf) ianao miaraka amin'ny zavatra nitranga notaterina ny 31 may.
CC BY NC SA avy amin'i Gobierno avy any Gatemala
Rudy Girón ao amin'ny bilaogy AntiguaDailyPhoto.com manoratra fa mila maka aina haingana amin'ny loza i Gatemala:
Mazava ho azy fa i Agatha no rivo-doza ratsy indrindra satria namely ny firenena manontolo izy niaraka tamin'ny orambatravatra niteraka tondra-drano sy tany nihotsaka tany amin'ny toerana maro, anisan'izany i La Antigua, Guatemala. Olona marobe no very trano ary marobe koa no nafindra toerana ka monina any amin'ny trano lay vonjy maika. vaovao marobe no afaka jerena amin'ny twitter sy facebook amin'ny #Pacaya, #AgathaGT,#CenizasGT, #ApagonGT, sy ny sisa. Afaka jerena koa ny sary rehetra nandritra ny rivo-doza Agatha izay nalefan'ny olona ao amin'ny http://is.gd/cvbam sy http://is.gd/cvbak. Tsy miombon-kevitra amiko ve ianao fa tokony hitsahatra amin'izay ny loza voajanahary?
Olona marobe any Goatemala no miombon-kevitra sy manantena fa hanampy ireo izay mila fanampiana ny firenena.